भेनेजुएला छोड्दै कोलम्बिया - मेरो ओडिसी - जियोफुमाडास
भेनेजुएला छोड्दै कोलम्बिया - मेरो ओडिसी
डिसेम्बर, 2018 आराम / प्रेरणा
के तपाईंले कहिल्यै आत्माविना शरीर महसुस गर्नुभयो? मैले हालसालै महसुस गरें। जीव एक जड इकाई हुन्छ कि केवल यो महसुस गर्दछ कि यो जीवित छ किनकि यसले सास फेर्छ। मलाई थाहा छ यो बुझ्न गाह्रो हुनुपर्दछ, र अझ यो भन्दा पहिले जब म आफैंमा सकारात्मक व्यक्तित्वको रूपमा आत्मिक र भावनात्मक शान्तिले भरिएको बारेमा घमण्ड गर्ने गर्थें। तर जब ती सबै सुविधाहरू फीका हुन्छन्, तपाईंलाई केही पनि दुख्न वा आपत्ति परेको जस्तो लाग्न थाल्दैन।
वैचारिक, राजनैतिक वा प्रासंगिक पक्षहरूको बाहिर, गोलगीको अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिन मात्र म यो बताउँछु। सबैले मिडियाले के भन्छ भनेर व्याख्या गर्न सक्दछ, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। यहाँ, मँ तपाईंलाई भर्खरै छोडिदिन्छु कि कसरी मेरो ओडिसी भेनेजुएलाबाट कोलम्बिया जान्छु।
यो सबै भेनेजुएलामा यो संकट भन्दा पहिले मेरो लागि थियो।
भेनेजुएलामा सबै कुरा परिवर्तन हुन थालेपछि मेरो शान्ति समाप्त भयो, यद्यपि यो कहिले पतन भयो भनेर निर्धारण गर्न सक्दिनथें, समस्याहरूको आक्रमणको साथमा जुन मैले सोचेकै थिएन। न त मलाई थाहा छ कि यो कसरी एपिफेनीको रूपमा मेरो दिमागमा विकसित हुँदै थियो, मेरो देश र मेरो परिवार छोड्ने निर्णय; जुन, आज सम्म सूर्य सम्म, मैले बाँच्नु परेको सबैभन्दा कठिन चीज भएको थियो।
म तिमीलाई बताउनेछु कि यो भेनेजुएला छोड्ने मेरो यात्रा कसरी थियो, तर पहिलो, म मेरो देशमा कसरी रहन वर्णन गर्दछु भनेर सुरू गरेर सुरु हुनेछु। यो कुनै सामान्य देश जस्तो थियो; तपाईले जे गर्न सक्नुभएमा स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको रोटी कडा कडा परिश्रम गर्नुहोस्, तपाईंको देश र तपाईंको ठाउँ जिन्दगी। म एकताबद्ध परिवारको आधारमा उठाइयो, जहाँसम्म तपाइँका साथीहरू तपाईंका भाइहरू हुन् र तपाईले मित्रताको सम्बन्धमा व्यावहारिक रगत सम्बन्ध बन्नुभयो भनेर बुझ्दछन्।
मेरो दादी जो आज्ञाकारिता थियो, उनी परिवारको स्तम्भ थियो, किनभने यो हामी सबै उत्पादक पुरुष बन्छौ किनकि उनीहरु मेरो देशमा भन्छन् echaos pa 'lante। मेरा चार अंकलहरू मेरो प्रशंसाको स्रोत हुन्, र मेरा पहिलो भाइहरूकुकुरभन्दा बढी भाइहरू कौन हुन्- र मेरी आमा, मेरो बाँच्ने कारण। म हरेक दिन कृतज्ञ ब्यूँझन्छु कि त्यो परिवारको हुन। छोड्ने निर्णय मेरो दिमागमा आएको थियो, प्रगतिको आवश्यकताको कारणले मात्र होइन तर मेरो छोराको भविष्यको कारण। भेनेजुएलामा, म हरेक दिन मेरो पिठोमा कवच बाँधिरहेछु र अझ राम्रो हुनको लागि हजार चीजहरू गरिरहेछु, सबै कुरा पहिलेको भन्दा झन् खराब थियो, मलाई लाग्यो कि म एक सर्वाइभोर प्रतियोगितामा छु, जहाँ केवल जीवित, दुर्व्यवहार गर्ने र बाचाकुरो विजेता नै थिए।
भेनेजुएला छोड्ने निर्णय
मैले भेडाहरू बुझें कि भेनेजुएलामा अवस्थित अवस्थित छैन, यहां सम्म कि सबै भन्दा आधारभूत दोषहरू: विद्युत सेवाको कमी, पान योग्य पानी, यातायात र खाना। संकटले मानिसहरूमा मूल्यको हानिमा आउँथ्यो, तपाईले अरूलाई हानिकारक बनाउन कसरी सोच्न सक्ने मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ, म बस्छु र सोच्छु कि सबै कुरा भयो भने परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुभयो।
मैले केही महिना मेरो टाउकोमा यात्राको योजना बनाएको थियो, अलि अलि गर्दै म करिब २०० डलर जम्मा गर्न सक्षम भएँ। कसैलाई थाहा थिएन, न त उनीहरू आश्चर्यचकित हुने आशा गरिएको थियो। दुई दिन अघि मैले मेरी आमालाई बोलाएँ र उहाँसँग मेरा साथीहरू (साथीहरू) सँग पेरू जाँदैछु भनेर बताएँ, र त्यो दिन टर्मिनलमा मेरो पहिलो स्टप कोलम्बिया पुग्ने बसको टिकट किन्नेछु।
यहाँ यातना सुरु भयो, त्यहाँ धेरैले थाहा पाउनेछन्, अन्य देशहरू जस्तो केहि काम गर्दैन, तपाईलाई चाहेको समयमा टिकट वा यात्रा टिकट किन्न असम्भव छ। मैले दुई दिन टर्मिनलमा सुतिरहेको थिएँ, एउटा मध्ये एउटा बस आउने प्रतिक्षा गर्दै थिएँ, किनकि स्पेयर पार्ट्सको अभावका कारण फ्लीटमा दुईवटा कार मात्र थिए। रेखाका मालिकहरूले प्रत्येक hours घण्टा सूची लाई पास गर्‍यो मान्छेलाई स्थिति सुरक्षित गर्नका लागि, उनीहरूको भनाइको साथः
"उहाँ यहाँ छैन जब उहाँले गुजारा सूचीमा आफ्नो सीट हराउनुभयो"
यो मानिसहरूको समुद्रमा अचम्मलाग्दो थियो जुन मेरो बाटो, पुरुष, महिलाहरु र बच्चाहरु कि टर्मिनलमा त्यहि बाटो लाग्न लागेका थिए; जुन म निश्चित रूपमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु, यो भयानक थियो, यसले खराब गल्ती गर्यो र मानिसहरूको भीडले तपाईंलाई क्लस्ट्रोफोबिक बनाएको थियो।
म त्यहाँ मेरा दुई दिन पर्खें, टिकट किन्न लाइनमा उभिए। मैले सुरु गरेको थिइनँ र निराशाको भावनाले मलाई स give्घर्ष गर्यो कि म हार मान्न तयार भएँ तर मैले भनेन। यसले मद्दत गर्‍यो कि मसँग मेरा साथीहरू थिए र हामी सबैले एक अर्कालाई सहयोग गरेका थियौं जसले हामीलाई राम्रो महसुस गराउँदछन्; मेरो आफन्तहरूको चुटकुले र कलहरूको बीचमा। त्यसोभए अन्ततः सान क्रिस्टाबल - तचीराको राज्यको लागि बसमा चढ्ने समय भयो। टिकट मूल्य थियो Bolivares Fuertes को 1.000.000लगभग उस समय न्यूनतम वेतन को 70%।
तिनीहरूले बसमा बसेर घण्टा बिताए, राम्रो कुरा के छ भने कम्तिमा मसँग जोड्नको लागि वाइफाइ थियो, मैले देख्यो कि कसरी धेरै खण्डहरूमा त्यहाँ राष्ट्रिय गार्डको चौकीहरू थिए, र ड्राइभरले एकदम छोटो रोक्छ, जहाँ उसले पैसा दिन जारी राख्न सक्दछ। जब म सान क्रिस्टबलमा आइपुगेँ बिहान 8 बजे देखि नै, मैले क्युकटा पुग्नको लागि अर्को यातायात खोज्नु प .्यो। हामी कुर्दै थियौं, त्यहाँ कुनै प्रकारको यातायात थिएन, हामीले सूटकेसका साथ हिंडिरहेका मानिसहरूलाई देख्यौं, तथापि, हामी जोखिममा परेनौं र त्यहाँ बस्ने निर्णय ग .्यौं। पर्खाई दुई दिन लाग्यो, सबै एक चौरमा सुतिरहेका थिए, जब सम्म हामी एक साझा टैक्सी लिन, प्रत्येक को भुगतान 100.000 बोलिभरेस Fuertes।
हामी यो क्युटोमा यस स्तम्भमा बिहान बिहान 8 छोड्यौं, जुन सबैभन्दा खतरनाक थियो, हामीले3alcabalas, एक CICPC, एक बोलिभियन नेशनल पुलिसबाट र नेशनल गार्डको अन्त्यमा जानुपर्छ। प्रत्येक अलास्टामा, तिनीहरूले हामीलाई खोजे जस्तै कि हामी ढोकाहरू थिए। उनीहरूले हामीलाई केबाट लिन सक्थे, मैले केवल केहि सामानहरू, मूल्यको केही र 200 $; कि म एक व्यावहारिक पहुँच योग्य स्थानमा राखिएको छु
आइपुग्दा, बिहानको १० बजे नै थियो, र तपाईले आफूलाई सल्लाहकार भनेर बोलाउने मानिसहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी -सायद- 30 र 50 $ को बीच चार्ज गर्न बाहिर निकलें स्टाम्पिंग प्रक्रिया को विस्तार गरे, तर मैले कुनै पनि ध्यान नहीं दिए, हामी कतार को लागि पुल मा बंद गर्यो र अन्ततः कोउत्टा मा प्रवेश गर्छन। यो अर्को दिन9मा त्यो रात थियो जुन हामी बाहिर निस्कने पासपोर्ट स्टाम गर्न सक्षम छौं।
उनीहरूले हामीलाई भने कि कोलम्बियाको इमिग्रेशन पासपोर्ट टिकटको लागि हामीसँग अर्को गन्तव्यमा टिकट हुनुपर्‍यो, र रातको was बजेदेखि मेरो अर्को गन्तव्यमा टिकट किन्न कुनै खुला टिकट अफिसहरू थिएनन्। मानिसहरू कराए।
तिनीहरू किनारा बन्द गर्न जाँदै छन्, टिकट नभएकाहरू यहाँ रहन बाध्य छन्, तिनीहरू अर्को नियन्त्रण बिन्दुमा सार्न सक्षम हुने छैनन्।
परिस्थिति अधिक तीव्र र चिन्तित भए, हामीले डरलाग्दो व्यक्तिहरू अनौपचारिक स्थानहरू उठाएका देखे, र तिनीहरूले हामीलाई यसो भने:
उनीहरूले चाँडै के गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ, रातको 10 पछि अर्धलीय गुरिल्लाहरू पैसाको लागि सोध्छन् र सबैलाई सबैबाट लिइरहेका हुन्छन्।
मृगौलायस, मेरो निराशामा के गर्नको लागि थाहा छैन, एक सल्लाहकार देखा पर्यो जसले मलाई क्यारकासमा बस्न सक्ने साथी बनेको थियो, मलाई र मेरो मित्रले बस लाइनको मालिकको कार्यालयमा लैजान थाले, तिनीहरूले हामीलाई प्रत्येक खरिद बेचे 105 मा $ र हामी अर्को दिन सम्म सुत्न एक ठाउँ समाधान।
त्यो राती मैले आराम गर्न सकेन, मलाई लाग्छ कि मैले ती सबै दिन बिताएको क्षणहरूले मलाई घृणित चेतावनीको स्थितिमा पारेको थियो, बिहान बिहान आइपुग्दा, हामी कोलम्बियाबाट आप्रवासनमा पासपोर्ट छाप्नको लागि कतार बनायौं र अन्तमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ।
सबै मानिसहरु जस्तै मेरो लाग्ने को खुशी छैन। जो बसाईएको सोच्दै छन् उनीहरूले सावधानी अपनाउनु पर्छ; यो यात्रा छोटो देखिन्छ, तर मैले अनुभव गरेको र मैले पनि देखेको कुनै पनि परिस्थितिमा जानु सजिलो छैन। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन मैले भुल्न चाहान्छु।
किनभने Patriotism तपाईं बोगोटा एक कुनामा सिक्का माग्दै कसैले को शर्ट मा हेर्न जब तपाईं शोक बनाउँछ भन्ने झण्डा द्वारा, हामी जहाँ जन्मिए थिए देशमा लागि सबै प्रेम भित्र उहाँलाई लगे एक, आफ्नो देश को सबै भन्दा राम्रो भन्नुहुन्छ।
यो अनुभूति गाह्रो छ, तपाईंको परिवारको साथ रहनको लागि। म सँधै आशावादी थिएँ, कठिनाइहरूमा पनि; र ममा विश्वास छ भने, यी सबै छोटो अवधि मा एक आशा दूर ले। हराएको छैन भने मात्र केहि परिवारको प्रेम हो। अहिलेको लागि, म केवल मेरो छोराको राम्रो भविष्य चाहन्छु।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो BAD सिक्न र शिक्षण अनुभव को अनुभव CAD मा आदी
अर्को पोस्ट बिग्रेको वा भर्चुअल वास्तविकता? प्रोजेक्ट प्रस्तुत गर्ने को लागी राम्रो छ? अर्को »